Zvibereko zveGerman Taona chidzidzo chedu pamusoro pehurukuro kare. Muchidzidzo ichocho, isu takadzidza chiGerman nemichero zvinyorwa uye zvakawanda chimwe nechimwe. Isu takatosanganisira mienzaniso yemitsara muchiGerman nezve michero muchidzidzo ichocho chinonzi michero yeGerman. Kana iwe uchida kutora kutarisa kune yedu yakawanda yakazara chidzidzo, tinya apa: German Zvibereko
VeGermany Veji Taona chidzidzo chedu pamusoro pehurukuro kare. Muchidzidzo ichocho chinonzi miriwo muchiGerman, takadzidza miriwo mizhinji yeGerman ine zvinoonekwa zvakanaka, takadzidza kuita mitsara mizhinji. Dzvanya pane iyi link kuti uverenge icho chidzidzo: VeGermany Veji
Mune ino musoro wenyaya, isu tinongotarisa chete mazita eGerman emichero nemiriwo. Dzvanya pane zvinongedzo zviri pamusoro kuti uwane hurukuro dzakazara, zvinoonekwa zvinoyevedza uye zvirevo zvemuenzaniso muchiGerman. Ose maviri pane yedu saiti German Zvibereko naizvozvowo VeGermany Veji Pane maviri akapatsanurwa ezvitsananguro nezve.
Iye zvino tichakuratidzirai maGerman michero nemiriwo mutafura.
Yedu pfupiso musoro wezvibereko zveGerman nemiriwo yeGerman ishamwari dzakakosha zvakadaro. Sezvatakambotaura, zvese pane yedu saiti German Zvibereko naizvozvowo VeGermany Veji Pane maviri akapatsanurwa ezvitsananguro nezve. Iyi hurukuro dzakagadzirirwa pachishandiswa zvakawanda zvakadzama, zvakadzama uye zvakanaka zvinoonekwa. Uye zvakare, yakawanda mienzaniso mitsara inopihwa. Kana iwe uchida kuverenga iyo misoro yakabatana zvakasiyana, unogona kubaya pane zvinongedzo.
german michero yemiriwoChiGerman chibereko nemuriwo hurukuromichero yechiGerman nemiriwogerman yemichero yemicherogerman miriwo micheromichero yemiriwo germanmichero nemiriwo mugerman
Ali anodaro 5 zuva rapfuura